Mandrindra Fikomiana Amin’ny Alàlan’ny Bilaogin-tsary Ireo Mpianatra Any Amin’ny Sekolim-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2017 19:10 GMT
Maherin'ny 40.000 ireo mpianatry ny sekolim-panjakana (ary amin'izao dia miampy vitsivitsy avy any amin'ny tsy miankina (ES) ihany koa) no nandray anjara tamin'ireo hetsika manerana an'i Silia tanatin'ireo herinandro vitsy lasa. Angatahan-dry zareo ny fitaterana maimaimpoana, fanadinana hidirana tsy andoavam-bola, fanavaozana ireo kilasy mianatra tontolo andro, ary ny fanenan-danja ny Lalàna Fototry ny Fanabeazana. Mitentina 40 dolara Amerikana ny fanadinana hidirana (ES) ho an'ny mpianatra iray (240 dolara Amerikana isam-bolana ny karama ambany indrindra). Tsy ampy ny fotodrafitrasa anatin'ireo sekolim-panjakana sasany ka tsy misy toeram-pisakafoanana ho an'ireo mianatra tontolo andro ary mbola ny tamin'ny taona 1980 ny Lalàna Fototry ny Fanabeazana (ES). Nanisy fanovàna an'ity lalàna ity ry zareo tao amin'ny fitondràna tamin'ny 1990, saingy tsy mbola niova firy ny fomba fijery.
Mandray anjara anatin'ireo diabe, hetsipanoherana, ary amin'ny alàlan'ny fibodoana ireo sekolim-panjakana, kôlejy ary anjerimanontolo izy ireo. Mikarakara atrikasam-pitenenana ihany koa izy ireo ary miara-mandrindra amin'ny ben'ny tanàna isam-paritra. Ary koa … amin'ny alàlan'ny vohikala, bilaogy ary ny bilaogin-tsary. Mahagaga fa raha nanontany ny fomba handaminana ny firenena ireo manampahefana, adinon-dry zareo ny nijery ny tao anaty aterineto. Manana eo amin'ny olona 6.000 eo io vondrom-pianatra mavitrika io ary mitoby ao amin'ny renivohitra, Santiago.
Manana ny vohikalany ny “Instituto Nacional”, iray amin'ireo sekolim-panjakana tena tranainy indrindra – maherin'ny 12 ireo filoham-pirenen'i Silia nianatra tao, i Ricardo Lagos no farany indrindra. Iray hafa ny bilaogin-tsarin'ny (ES) José Victorino Las Tarrias, ny Liceo 1 Javiera Carrera (ES), ny bilaogy sy ny bilaogin-tsarin'ny (ES) Liceo de Aplicación, ary ny Barros Borgoño (ES). Mampiasa anaram-bosotra ny ankamaroan'izy ireo hiresahany momba ilay sekolim-panjakana, tahaka ny “Carmelianas” (ES), ohatra.
Mamoaka ireo vaovao farany, ireo fiantsoana hikomy, ireo fihaonana sy hetsika, ary koa … ny fifaninanana miaraka amin'ireo bilaogin-tsarin'ny sekolim-panjakana rehetra ao anaty lisitra izy ireo mba hifidianana izay tsara indrindra. Mivoaka anatin'ity vondrona ity ireo mpitarika vaovao izay raha tanatinà toejavatra hafa, mety ho voavesatry ny resa-birao, ny bilaogy kosa lasa varavarankely iray mampitombo ireo mpitarika sady mampandray anjara, mampandefa sary, mampaneho hevitra, mampifidy sy mampandefa imailaka ireo mpianatra hafa.
Ankehitriny, ny fikarakaràna fikomiam-pirenena amin'ny 30 May no fikasàna goavan'ireto mpianatra. Tsy hidina an-dalambe izy ireo, ny hevitra amin'izany dia ny hanana fihaonana milamina eo anivon'ireo mpianatra. Nanararaotra ity toejavatra ity ny elatra havanana mba hanakianana ny fitondran'i Michelle Bachelet. Miara-miasa amin'ireo parlemanta avy amin'ny elatra havia sy havanana ny Minisitry ny Fanabeazana amin'izao mba hifanekena amin'ny vahaolana tsara indrindra hamahàna ity fangatahan'ny mpianatra ity.